‘S’ बाट नाम सुरु हुनेहरु यस्ता हुन्छन्, एक पटक पढ्नै पर्ने कुराहरु – ताजा समाचार
तपाईंको नामको पहिलो अक्षर तपाईंको व्यक्तित्वको विभिन्न राज खोल्ने गर्दछ । सायद तपाईंलाई थाहा नहोला, तर यो यस्तो जानकारी हो जसमार्फत तपाईं आफ्नो बारे वा अन्य व्यक्तिका विशेषता सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । यहाँ आज हामी तपाईंलाई अंग्रेजी अक्षरको ‘एस’ बाट नाम सुरु हुने व्यक्तिको विशेषता बताउँदैछौं ।
अंग्रेजी वर्णमालामा यो अक्षर १९ औं नम्बरमा आउँछ । अंकशास्त्रका अनुसार यो अक्षर नम्बर १ अन्तर्गत आउने गर्दछ जो स्वभाविक रुपले नेतृत्वको गुण दिने मानिन्छ ।
आत्मविश्वासी र महत्वाकांक्षीः
यस्ता व्यक्तिहरु मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास राख्दछन् र कुनै पनि कामलाई पूरा गर्नका लागि ज्यानै दिन्छन् । आफूलाई निकै नियन्त्रणमा राख्न सक्ने यी व्यक्तिहरु जे सोच्छन् त्यसलाई पूरा गरेरै छोड्छन् । स्वाभिमानी र साहसी हुने भएकाले उनीहरुको महत्व अझै बढाइदिन्छ ।
र यो भिडियो पनि हेर्नुहोस्
काठमाडौँमा फेला परिन् ठाउँको ठाउँ गायब हुने बालिका ! तिन दिनसम्म कहाँ जान्छिन् ? (हेर्नुस् पुरा भिडियो)
यो अक्षरबाट नाम सुरु हुने स्त्री वा पुरुष दुबै निकै बुद्धिमान हुन्छन् । आफ्नो बौद्धिक गुणका कारण उनीहरु ज्ञानलाई पनि निकै महत्व दिने गर्दछन् । उनीहरु मेहनतले हरेक कुरा हाँसिल गर्दछन् त्यसकारण जीवनको हरेक क्षेत्रमा सफल हुन्छन् ।
प्रतिभावना र इमान्दारः
उनीहरु प्रतिभाका धनी हुन्छन् । नयाँ प्रोजेक्ट वा रचनात्मक क्रियाकलापमा उनीहरुले गरेका हरेक काम एकदम नयाँ र प्रभावशाली हुने गर्दछ । उनीहरु इमान्दार हुन्छन र साँचो बोल्न मन पराउँछन् । त्यसकारण अरुले गरेको कामका लागि पनि उनीहरुलाई पूरा क्रेडिट दिने गर्दछन् ।
राम्रा र आकर्षकः
उनीहरु हेर्दा निकै राम्रा हुन्छन् भने व्यक्तित्व निकै आकर्षक हुन्छ । बोल्ने शैलीदेखि कपडा लगाउने तरिकासम्म हरेक कुरा निकै उत्कृष्ट हुन्छ जसका कारण उनीहरुप्रति मानिसहरु निकै प्रभावित हुन्छन् ।
इमान्दार भएका कारण सम्बन्ध, कार्यक्षेत्र वा व्यवसायमा पूर्ण रुपमा बफादार हुन्छन् । प्रेम वा वैवाहिक सम्बन्धमा पनि साथीप्रति बफादार हुनु उनीहरुको प्राथमिकता हुन्छ । तर उनीहरु रोमान्टिक भने हुँदैनन् ।
यसका साथै सम्बन्धमा उनीहरुको एक कमी पनि छ । धेरै पटक सम्बन्धमा आफू हाबी हुन चाहन्छन् जसका कारण उनीहरुको वैवाहिक वा प्रेम–सम्बन्ध लामो समयसम्म टिक्न पाउँदैन ।
थुप्रै विशेषताका साथै उनीहरुका अवगुण पनि छन् । यी व्यक्तिहरु रिसाहा हुन्छन् । यतिमात्र नभई स्थान र परिस्थितीको ख्याल नगरी उनीहरु आफ्ना भित्री कुराहरु भन्ने गर्दछन् जसका कारण दोस्ती, व्यापार र सम्बन्धमा तनावको स्थितीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तिम पटक अपडेट गरिएको : February 1st, 2020,
महिनावारी भएको कति दिनमा से;क्स गर्दा गर्भ…
कोरोना भाइरसको बारेमा अनुमान लगाइएको सबै कुरा…
कोरोना बारे नयाँ तथ्य फेला, २७ फिट…
अब घरमै बसेर आफैं जाच्नुहोस् कोरोना संक्रमणको…
नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरण सुरु, कुन…